Google Discover ga -enwe ọkwa na afọ a | Androidsis
Nchọpụta Google bụ ezigbo ụzọ iji na-adị kwa ụbọchị na akụkọ nke isiokwu na-amasị anyị na gam akporo. N'ezie, anyị nwere ike ịhọrọ isiokwu ndị anyị chọrọ ịnọgide na-eji ngwa ahụ na ekwentị. Ọ bụ ezie na nnukwu G na-achọ ụzọ ọhụrụ iji nweta ọtụtụ ihe na ikpo okwu a. Ya mere, ewebatala mgbasa ozi na ya. Ya mere na ndị ọrụ ga-enwe ike ịzụta ngwaahịa na ya.
Echiche bụ na ndị ọrụ ga-enwe ike mee nzụta ozugbo na igwe nchọta ihe. Yabụ ọ bụrụ na ị jiri Google Discover ịchọ ngwaahịa, ọ ga-ekwe omume ịzụta ụzọ a. A na-ezube ọkwa ndị a iji nyekwuo ozi gbasara ngwaahịa a.
Mgbanwe ndị a bụ akụkụ nke mmeghari Shozụ ahịa Google, nke bu eziokwu. Companylọ ọrụ ahụ ekwupụtala na ọkwa ahụ ga-erute ọtụtụ ọrụ ya, ọ bụghị naanị Discover. Ebe YouTube ma ọ bụ Google Images ga-enwekwa ha. Ya mere, search engine gbanwere n'ụzọ dị ka ụdị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. O yiri ka emeela ihe Instagram emewo na nke a.
E gosipụtara ya dị ka ụzọ iji melite mmekọrịta n'etiti mgbasa ozi na ndị ahịa. Yabụ ihe niile na - emekọrịta mmekọrịta ma dịkwa mfe iji. Ebe ọ bụ na n'ụzọ a, ọ ga-adịrị mfe ịnweta nnweta ozugbo site na njin ọchụchọ. Mgbanwe nke anyị na-ahụ na ppingzụ ahịa ghọọ usoro azụmahịa. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na enwere ike ịtụ ya na ndị ahịa ọ bụrụ na enwere nsogbu na ịzụta ngwaahịa.
Google Discover nwere ike bụrụ ihe kacha emetụta na nke a. Ebe ọ bụ na iwebata mgbasa ozi bụ ihe a hụrụ na ụfọdụ enweghị ntụkwasị obi nke ndị ọrụ. N'ihi na ọ nwere ike imetụta ahụmịhe nke iji ngwa a na ekwentị. Karịsịa ebe ọ bụ na a ga-enwe ụdị dịgasị iche iche nke mgbasa ozi, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịghọ ezigbo ihe mgbochi.
Mgbasa ozi na Google Discover ga-eze ẹkenam site na njedebe nke afọ. Enweghi ụbọchị ọ bụla akọwapụtara n'oge a. O doro anya na anyị ga-amata ụbọchị dị nso. Mana enweghị obi abụọ, ọ ga-abụ mgbanwe dị ukwuu, nke nwere ike ọ gaghị aga nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Gugul na ewebata mgbasa ozi ichoputa
Oppo nwere ike ịmalite igwefoto igwefoto na-egosipụta n’afọ a